May Nyane: ပွင့်တူရွက်တူ
ဟုတ်ပါရဲ့အမရေ... ကျောင်းလေးက လှိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့ တူလိုက်တာ...၊
အမ အိမ်ပြန်ချိန်က ၇ နာရီခွဲဆိုတော့ ဆောင်းတွင်း ရောက်မှာနဲ့ ရှေ့လျှောက်ဆို မှောင်ပြီ၊ အကြာကြီးများ တက်ရမှာလား မသိ၊
အဲဒီမှာ လင်မျှော်ကုန်းနဲ့ မျောက်ရွာကော ရှိလားအမ? ကြုံရင် ကျနော့်အတွက်ပါ စိုးမြင့်ကျော်တစ်ပွဲလောက် စားခဲ့လိုက်ပါဗျာ...။ :D
တသက်လုံး ကျောင်းသူပဲ ဖြစ်ချင်ပါရဲ့ ဆရာမရယ်။ စာမေးပွဲတွေကြောက်ပေမဲ့ ကျောင်းတွေကို ချစ်စိတ်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်မှာပါပဲ။
ဆရာမကျောင်းလေးက တကယ်ပဲ RC2နဲ့ တူပါတယ်။
when I have looked English - Burmese
Dictionary, the mining of( Paradox)is (Wi Yaaw Di).
Problem is I don't know what the meaning of Wi Yaw Di ..
.Can you explain in Brumese
the meaning of Wi Yaw Di, please
၀ိရောဓိ ရဲ့ သဘောကတော့ေ၀၀ါးနေတာ၊ ဆုံးဖြတ်ရခက်တာ၊ ဟိုဟာနိုးနိုး၊ ဒီဟာနိုးနိုးနဲ့ ချီတုံချတုံဖြစ်တာ မျိုးမှာ သုံးတာပါပဲ..။
[C] ဝိရောဓိ။ It isaparadox that professional comedians often have unhappy lives.
(က) [C] သမ္မုတိ ဝိရောဓိ။ ‘more haste, less speed’isawell-known paradox. (ခ) [U] (အရေးအသား စသည်တွင်သုံးသော) ဝိရောဓိသဘော။awork full of paradox and ambiguity. paradoxical /¿pærå'd2ksÇkl/ adj paradoxically /-kli/ adv
very much Sayarma.